Ngabe Uyahlangabezana Nokulindelwe Ukuthenga Kwabathengi Kulo nyaka? | Martech Zone
Ngabe Uyahlangabezana Nokulindelwe Ukuthenga Kwabathengi Kulo nyaka?
NgoMgqibelo, Okthoba 25, 2014 Douglas Karr
Kufanele uqale nini ukukhushulwa ngamaholide? Ingabe uhlela imikhankaso yedili online? Ngabe ulungiselela isiza sakho ukuze abathengi be-inthanethi bathole kalula imibono yezipho? Wenzani ukuheha abathengi okuyibo ukubukisa ukuthenga khona lapho khona lapho? Ingabe unemininingwane eyanele yomkhiqizo etholakala kusayithi lakho? Ingabe igumbi lakho lokubonisa eliku-inthanethi livumelanisiwe nokunikezwa kwakho kwangempela kwesitoko? Ingabe isipiliyoni sakho esiku-intanethi nesethebhulethi sikujabulisa?
Abakwa-SDL bahlole abathengi abangaphezu kuka-3,000 XNUMX e-United States, eFrance, eJalimane, eNetherlands, e-United Kingdom nase-Australia. Lolu cwaningo lubheka ngqo esikhathini esizayo samaholide nokuthi abathengi banamuhla basebenzisana kanjani nemikhiqizo, lapho basebenzisana kakhulu nokuthi abathengisi basebenzisa kanjani izindlela ezintsha zokumaketha ukuzibandakanya nabo.
Le yimibuzo ebalulekile okudingeka uyisukumele manje njengoba sesizongena ngesivinini esigcwele sesikhathi sokuthenga samaholide sika-2014! Chofoza ku-infographic ukulanda imininingwane eyengeziwe kwinhlolovo.
Tags: Isikhathi samaholide esingu-2014inhlolovo yabathengiimibono yesiphoukuyothenga amaholideisabelesdlukubukisatablet